मानिसको अन्त्य र गन्तव्य | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
1 सारा संसारमा विपत्तिहरू बारम्बार आइरहेका छन्, र आकारमा ती वृद्धि भइरहेका छन्, यसरी आखिरी दिनहरूको आगमनको घोषणा गर्दैछन्। बाइबलले भन्छ, “तर सबै कुराको अन्त्य नजिकै छ” (१ पत्रुस ४:७)। हामीलाई थाहा छ, जब प्रभु आखिरी दिनहरूमा फर्केर आउनुहुन्छ उहाँले असललाई इनाम र दुष्टलाई दण्ड दिनुहुनेछ र मानिसहरूको अन्त्य निर्धारण गर्नुहुनेछ। त्यसो भए उहाँले कसरी असललाई इनाम दिनुहुनेछ र दुष्टलाई दण्ड दिनुहुनेछ, र उहाँले मानिसहरूका अन्त्यहरू कसरी निर्धारण गर्नुहुनेछ?
2 प्रभुले यसो भन्दै हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार गर्न जान्छु। अनि यदि म जान्छु र तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पर्छु भने, म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म आफै ग्रहण गर्नेछु; ताकि म जहाँ छु तिमीहरू पनि त्यहीँ हुन सक” (यूहन्‍ना १४:२-३)। प्रभु येशू पुनरुत्थान हुनुभयो र हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्न स्वर्गमा चढिजानुभयो, यसैले यो ठाउँ स्वर्गमा नै हुनुपर्दछ। तापनि तपाईं प्रभु येशू फर्केर आउनुभएको छ र पृथ्वीमा परमेश्‍वरको राज्य स्थापना गर्नुभएको छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। मैले यो कुरा बुझिनँ: स्वर्गको राज्य स्वर्गमा छ कि पृथ्वीमा छ?
3 तपाईं भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले प्रत्येकलाई त्यसको वर्गअनुसार छुट्ट्याउन, असललाई इनाम दिन र दुष्टलाई दण्ड दिन, पुरानो युगलाई अन्त्य गर्न न्यायको काम गर्नुहुन्छ, र अन्त्यमा ख्रीष्टको राज्य पृथ्वीमा पूरा हुनेछ। ख्रीष्टको राज्य पृथ्वीमा कसरी देखापर्नेछ? र त्यो राज्यको सुन्दरता कस्तो देखिनेछ?
4 चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र धार्मिक संसारले पागलले झैँ सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको निन्दा र विरोध गरेको छ, यस क्रममा धेरै अफवाह र भ्रामक कुराहरू फैलाएको छ। ती अफवाहहरू र भ्रामक कुराहरूलाई अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्नेहरू, साँचो बाटोको खोजी र अनुसन्धान गर्न कुनै कोसिस नगर्नेहरूलाई परमेश्‍वरले कस्तो व्यवहार गर्नुहुनेछ? तिनीहरूको अन्त्य कस्तो हुनेछ?
5 कतिपय मानिसहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर नै फर्केर आउनुभएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका छन्, तर तिनीहरू गिरफ्तार हुने र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सताइने डरले अनि धार्मिक समुदायका पाष्टरहरू र एल्डरहरूद्वारा डर देखाइएको र धम्की दिइएकोले साँचो बाटोलाई स्वीकार गर्ने साहस गर्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरूको अन्त्य कस्तो हुनेछ?
6 परमेश्‍वरका मानिसहरू भनेका को हुन् र सेवाकर्ताहरू भनेका को हुन्
7 मानवजातिको सुन्दर गन्तव्य कस्तो हुनेछ